प्रधानमन्त्रीद्वारा चितवनको लंकुस्थित लक्ष्मी मावि ‘ख’ केन्द्रबाट मतदान – Himalaya TV
Home » समाचार » प्रधानमन्त्रीद्वारा चितवनको लंकुस्थित लक्ष्मी मावि ‘ख’ केन्द्रबाट मतदान
प्रधानमन्त्रीद्वारा चितवनको लंकुस्थित लक्ष्मी मावि ‘ख’ केन्द्रबाट मतदान
३१ बैशाख २०७४, आईतवार १०:१९
विशाल कोइराला / चितवन ३१ बैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ लंकुस्थित लक्ष्मी मावि ‘ख’ मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैभन्दा पहिले बिहान ७ बजेर ८ मिनेटमा मतदान गरेका हुन । लंकु मतदान केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले मतदान गरेपछि अन्य मतदाताहरुले मतदान सुरु गरेका थिए । मतदान पछि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा तालमेल हुनु अस्वभाविक नरहेको भन्दै सहजरुपमा लिनु पर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहाल आजै काठमाडौं र्फकने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यसैबिच चितवनमा ३ लाख १३ हजार २ जना मतदाता संख्या रहेको छ । १ सय ६६ मतदान स्थल र ३ सय ७६ मतदान केन्द्र रहेको निर्वाचन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा कुल १ लाख ५० हजार २ सय ७४ मतदाता रहेका छन् । जसमा ६९ हजार ४ सय ५३ जना पुरुष र ८० हजार ८ सय २१ जना महिला मतदाता रहेका छन् । अन्य ठाउंमा भन्दा भरतपुरमा ११ हजार ३ सय ६८ जना महिला मतदाता संख्या भरतपुरमा बढी छ । भरतपुरमा सबैभन्दा बढी वडा नं. ११ मा १० हजार ३४ जना र सबैभन्दा कम वडा नं. २४ मा २ हजार २ सय ५४ जना मतदाता रहेका छन् ।